License Plate Backup Kamera, Suv License Plate Backup Kamera, Pamusoro License Plate Kamera inogadzira muChina
Shenzhen Sunveytech Co.,LTD [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Americas , Europe , Worldwide Exporter:71% - 80% Certs:CE, FCC, RoHS Tsanangudzo:License Plate Backup Kamera,Suv License Plate Backup Kamera,Pamusoro License Plate Kamera,Mount License Plate Kamera,,
Home > Products > Mota Backup Kamera > License Plate Backup Kamera
License Plate Backup Kamera
Zvigadzirwa zve License Plate Backup Kamera , isu tiri vashandi vanobva kuChina, License Plate Backup Kamera , Suv License Plate Backup Kamera vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Pamusoro License Plate Kamera R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Car Backup Kamera, License Plate Backup Kamera ine HD Mufananidzo Waterproof uye Wide View Angle Reverse Rear View Kamera yeCars Pickup Matiraki Jeep SUV RV [ High Image Quality ] Iine HD Lens uye 170 ° Super Kuona Angle , iyi backup kamera yakakwanira zvakakwana yekumashure-yekutarisa yekuvhara pasina mufananidzo...
License ndiro yakakwiridzwa girazi bhaudhi kamera, nyore kuisa. Inokodzera mhando dzemotokari dzakawanda dzinosanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe IP68 chiyero chisina mvura uye dope chiratidzo, chakagadzirwa uye kuyedzwa kwakanyanyisa mamiriro ekunze. Inodzivirirwa kubva pakadzika pasi pemvura mumvura....
License ndiro yakakwiridzwa girazi bhaudhi kamera, nyore kuisirwa. Inokodzera mhando dzemotokari dzakawanda dzinosanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe IP68 chiyero chisina mvura uye dope chiratidzo, chakagadzirwa uye kuyedzwa kwakanyanyisa mamiriro ekunze. Inodzivirirwa kubva pakadzika pasi pemvura...
License ndiro yakakwiridzwa girazi bhaudhi kamera, nyore kuisirwa. Inokodzera mhando dzemotokari dzakawanda dzinosanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe IP67 chiyero chemvura isina mvura uye humbowo hwemadhaka, hwakagadzirwa uye kuyedzwa mamiriro ekunze akanyanya. Inodzivirirwa kubva pakadzika pasi pemvura...
License Plate yakakwiridzwa girazi bhaudhi kamera, nyore kuisa. Inokodzera mhando dzemotokari dzakawanda dzinosanganisira SUV, Pickup, Rori, Mini mota, nezvimwe IP68 chiyero chisina mvura uye dope chiratidzo, chakagadzirwa uye kuyedzwa kwakanyanyisa mamiriro ekunze. Inodzivirirwa kubva pakadzika pasi pemvura mumvura....
China License Plate Backup Kamera Vatengi
1.F Pamberi kutarisa kana kumashure maonero mufananidzo wakasarudzika kuburikidza nebasa cheni. Chaizvoizvo kubatsira iwe kutarisa mapofu mapofu murima, ita iwe kupaka uye kudzosera zviri nyore.
2.High Quality Image: Kugadzirisa: 420 TV mitsara; Anobudirira pixels: 628 X 586 pixels.
3. License plate backup kamera inogona kukwana chero mota.
4.Imvura isiri yemvura inogadzirisa bhaidhi kamera ine IP68 chiyero, zvinoreva kana yakaiswa, yakakodzera kushanda mune inenge mamiriro ekunze mamwe mamiriro ekunze.
5.Low simba rekushandisa dhizaini zvinoreva kuti kamera inoshanda zvakanyanya nekusimbisa uye inoshandisa zvisingasviki 40mA.
Suv License Plate Backup Kamera
Mount License Plate Kamera